Aiza ny tsy fivadihanao? | Martech Zone
Aiza ny tsy fivadihanao?
Alatsinainy Oktobra 31, 2011 Talata, Novambra 1, 2011 Douglas Karr
Ny tsy fivadihana dia faritana hoe ny kalitaon'ny tsy fivadihana amin'ny olona na zavatra hafa. Efa nahatsikaritra ve ianao Ahoana no ny tsy fivadihana anefa no resahina? Miresaka momba ny fomba mpanjifa tsy mivadika, ahoana mpiasa tsy mivadika, ahoana mpanjifa tsy mivadika, ahoana mpifidy tsy mivadika…
Miresaka momba ny mpampiasa tsy fivadihan'ny mpiasa, saingy avy eo manakarama any ivelany izy ireo, tsy mampivelatra ny talentany manokana ao anatiny, na ratsy kokoa - manilika ny talenta mahatoky izy ireo. Fa maninona no ny tsy fivadihan'izy ireo hatramin'ny farany ambany sa ny tompon-trosa?
Manantena ny mpanao politika tsy fivadihan'ny mpifidy, fa avy eo mifidy mpitondra izay mifidy amin'ny làlan'ny antoko isika ary manadino izay noheverina fa solontenany. Fa maninona no ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny antokony izay lehibe kokoa noho ny mpifidy?
Miresaka momba ny orinasa mpanjifa tsy mivadika, saingy manolotra ny mpanjifa vao nahazo fiheverana bebe kokoa izy ireo ary fifanarahana tsara kokoa noho ny efa misy. Aiza ny tsy fivadihana amin'ireo mpanjifa efa misy? Tiako ilay horonantsary avy amin'ny Banky Ally izay mijery mijery vazivazy amin'ny fahazoana ny mpanjifa
Ka maninona isika no mandrefy hatrany ny tsy fivadihana hatramin'ny farany?
Toa isaky ny misy olona miresaka momba ny tsy fivadihana dia tsy miresaka momba izany izy ireo ny tsy fivadihan'izy ireo, miresaka momba ny tsy fivadihan'ny mpanjifa na ny mpiasa amin'izy ireo izy ireo. Fa maninona no mandeha toy izany? Heveriko fa tsy tokony.
Zava-dehibe amiko ny tsy fivadihana. Rehefa misy mijery ahy amin'ny masony ka manolo-tànana ahy izy ireo dia omeko lanja mihoatra ny taratasy ara-dalàna na sonia rehetra. Rehefa misy olona mandoa vola amin'izany, toy ny mpivarotra na mpiara-miasa amiko, dia ratsy toetra tokoa aho. Raha vonona ny hahafoy ny tsy fivadihan'izy ireo izy ireo, tsy misy zavatra tsy hataon'izy ireo na kely aza. Hiezaka mafy aho mba tsy hanao raharaham-barotra amin'ny orinasa toy izany intsony.
Ny Tokana mpanjifa Manantena aho fa ny tsy fivadihana no namatsy vola. Matetika ny orinasa dia mampihena ny sarany na mivezivezy amin'ny orinasa tadiavin'izy ireo - tsy misy hafa amin'izany izahay. Izahay dia tsy manisy fihenam-bidy ho an'ny fahazoana, fa matetika dia manome fanomezana be dia be ho an'ireo orinasa tsy manana safidy hafa. Raha vantany vao tafarina izy ireo, dia manantena aho fa ho feno fankasitrahana izy ireo noho ny fampiasam-bola nataonay ary hijanona miaraka aminay izy ireo. Ny marina dia, tsy dia hitantsika izany matetika. Toa maty ny tsy fivadihana.
Raha mandoa tsara antsika ny mpanjifa mba hahazoana valiny - ary tsy manao izany izahay - tsy antenaiko izany tsy fivadihana Avy tamin'io mpanjifa io satria tsy nitazona ny faran'ny fifanarahana izahay.
Raha ny marina rehetra dia heveriko fa ny fihetsiketsehana politika tao anatin'ny roa taona farany dia momba ny tsy fivadihana avokoa. Heveriko fa ny ankamaroan'ny olona dia milentika am-pifaliana vola bebe kokoa am-paosin'olona manan-karena… saingy manantena izahay fa tsy hivadika amintsika mpanjifa izy ireo. Steve Jobs dia ohatra mivaingana amin'izany. Niala tsiny tamin'ny tombam-barotra sy ny famokarana ivelan'ny morontsiraka izahay satria nokarakaraina tsara izahay mpanjifa.
Moa ve ianao manome fahatokiana mitovy amin'ireo mpiara-miasa sy mpanjifananao araka ny antenainao amin'ireo mpivarotra sy mpiasao?
Tsy fahombiazan'ny Facebook